အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ဘွဲ့ရစရာမလိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက်
အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ဘွဲ့ရစရာမလိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇) ချက် ၁ – ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အရည်အသွေး အ လုပ် အ ကိုင် ရ ရှိ မှု ဟာ ကျွမ်း ကျင် မှု နဲ့ အ ရည် အ Continuous reading
အိုမင်းသွားသော အာဇာနည်မြင်း (ပညာပေးပုံပြင်)
အိုမင်းသွားသော အာဇာနည်မြင်း (ပညာပေးပုံပြင်) ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက တစ်နေ့ကို မိုင်တစ်ထောင် သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းပျိုလေး တစ်ကောင် ရှိတယ်၊ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသဖို့ အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတယ်…. ကုန်သည် လာပြောတယ်၊ ` မင်းငါနဲ့လိုက်နိုင်မလား´ မြင်းက ခေါင်းခါပြီး ပြောတယ်၊`ငါက တစ်နေ့ မိုင်တစ်ထောင် သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည်မြင်းကွ… Continuous reading
မိုးမိုးမြင့်အောင် ယခု အချိန်ထိ လှနေအောင် ထိန်းသိမ်း နိုင်တဲ့ သူမရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
05/06/2019 Yan Naing 0
မိုးမိုးမြင့်အောင် ယခု အချိန်ထိ လှနေအောင် ထိန်းသိမ်း နိုင်တဲ့ သူမရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် အကယ်ဒမီ မိုးမိုးမြင့်အောင် ဆိုတာ အမြဲတမ်း လှပ နှပျိုနေတဲ့ မင်းသမီး တွေရဲ့ icon တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေ လှုပ်ရှား ခဲ့တဲ့ ကာလ Continuous reading
ရသေ့တောင်ရောက်နေလို့ ရုံးချိန်း မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော် ဒီနေ့(ဇွန်လ၅ရက်)နေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ရုံးချိန်းသို့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော် တက်ရောက်လာခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ(၄၁၇)နဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ဟာ ဒီနေ့(ဇွန်လ၅ရက်)မှာ ချိန်းဆိုထားတဲ့ ရုံးချိန်းသို့ တက်ရောက်လာခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဝေဠုကျော်ဟာ ရသေ့တောင်သို့ ရောက်နေတာကြောင့် Continuous reading
ဘုန်းကံရှိသော မိန်းမများ(အမျိုးသမီးများအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်) အမျိုးသမီးများအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် အစွန့်ပစ်ခံမိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောက်ျားဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ အပြစ်ရှာထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေ စွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမတချို့ ဘဝပျက်မတတ် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် …. . … အမှန်က ပျော်ရမှာပါ ….. ။ လက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါ ….. ကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း Continuous reading
အိပ်ချိန်မှန်ရဲ့သားနဲ့ အိပ်ရေးမဝသလို ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းရင်း
အိပ်ချိန်မှန်ရဲ့သားနဲ့ အိပ်ရေးမဝသလို ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းရင်း အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှုဆိုတာ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး တစ်နေ့အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇နာရီ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝမှ ကျန်းမာမယ်။ တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ကိုင်နေမယ်။ အားအင်ပြည့်ဝနေမှာပါနော် …. Continuous reading
လူတိုင်း သိထား သင့်တဲ့ ခေါင်းကနေ ရေစတင် လောင်းချိုး ခြင်း၏ ကြောက်မယ်ဖွယ် ဆိုးကျိုး…
လူတိုင်း သိထား သင့်တဲ့ ခေါင်းကနေ ရေစတင် လောင်းချိုး ခြင်း၏ ကြောက်မယ်ဖွယ် ဆိုးကျိုး… ခေါင်းကနေ ရေ စတင် လောင်းချိုးတာက လေဖြတ် တတ်တယ် ဆိုတာ ” သင် သိပါရဲ့ လားရေချိုးနေစဉ် ဦးခေါင်းကို စတင်ပြီး ရေလောင်း မချိုးသင့်ပါ … Continuous reading
ထားဝယ်-မောင်းမကန်လမ်းနံဘေး ရော်ဘာခြံအတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသတ်ခံရမှု ကျူးလွန်သူကို ခုထိဖမ်းမမိသေး
ထားဝယ်-မောင်းမကန်လမ်းနံဘေး ရော်ဘာခြံအတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသတ်ခံရမှု ကျူးလွန်သူကို ခုထိဖမ်းမမိသေး ထားဝယ်-မောင်းမကန်သွား ကားလမ်းနံဘေးရှိ ရော်ဘာခြံအတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး အသတ်ခံရသည့်ကိစ္စတွင် ကျူးလွန်သူကို ယခုချိန်ထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်း ထားဝယ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးခင်းနှိမ်နှင်းရေး အဖွဲ့ထံမှသိပါရသည်…. လက်ရှိတွင် ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးနိင်ရန် စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထားဝယ်ခရိုင် မှူခင်းနှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့မှပြောသည်။အသက်ခံရသည့် အမျိုးသမီးမှာ အသက်၁၉နှစ်ရွယ်ရှိပြီး ထားဝယ်မြို့နယ် ရောင်းမော်ရွာတွင်နေထိုင်သူဖြစ်သည်…. “ကျွန် Continuous reading
လူ (၂၀) ခန့်က …လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲဝင်လာပြီး… လူ(၄) ဦးကို …ဓားနဲ့ ခုတ်
လူ (၂၀) ခန့်က …လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲဝင်လာပြီး… လူ(၄) ဦးကို …ဓားနဲ့ ခုတ် မြိတ်မြို့တွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ ဝင်ရောက် ဓါးခုတ်မှုဖြစ်ပွား ၄ ဦးဒဏ်ရာရ မြိတ်မြို့၊ ကန်ကြီးနယ်မြေ သာကေတသဲကွင်းရှိ ဧဒင်လဘက်ရည်ဆိုင်တွင် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့၊ ည ၈ နာရီခွဲခန့်က ဓါးခုတ်မှုဖြစ်ပွားတာကြောင့် Continuous reading